ဗီတာမင်ဘီစစ် လိုအပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ဗီတာမင်ဘီစစ် လိုအပ်ရတဲ့ အကြောင်းရင်းများ
အများသိကြတဲ့ ဗီတာမင်ဘီစစ်က ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံကြောတွေ ကောင်းမွန်စွာလုပ်ငန်း လုပ်ဖို့အတွက် အရေးပါတဲ့နေရာမှာ ပါဝင်ထမ်းဆောင်လျက် ရှိပါတယ်။ သွေးနီဥတွေကို တည်ဆောက်ပေးတယ်။ ဟော်မုန်းတွေကို ထိန်းညှိစေပါတယ်။ အားအင်နည်းပါးပြီး သွေးအားနည်းသူတွေအတွက်ကတော့ အကောင်းဆုံး သက်စောင့်ဓာတ်လို့ဆိုရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်ဘီစစ်က စိတ်ဖိအားဟော်မုန်းနဲ့ အိပ်စက်မှုဆိုင်ရာ ဟော်မုန်းတွေကို တည်ဆောက်ပေးပါတယ်။
>> ဗီတာမင်ဘီစစ်ကို ပမာဏ ဘယ်လောက်လိုအပ်တာလဲ?
ဗီတာမင်ဘီစစ် က နေ့စဉ် ဆီးထဲကနေ စွန့်ပစ်တာပါ။ ဒါ့ကြောင့် နေ့စဉ် လိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်။
တစ်ရက်ကို ၁.၄ mg လိုအပ်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းရင် ပိုမိုလိုအပ်ပါတယ်။
>> ဗီတာမင်ဘီစစ်လိုအပ်နေတဲ့ လက္ခဏာတွေက -
● အသားအရေတွေ ခြောက်တာ
● ခြေသည်း၊ လက်သည်းတွေ ကျွတ်ဆတ်တာတွေ ဖြစ်ပေါ်ခံစားရပါတယ်။
>> ဗီတာမင်ဘီစစ်ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာများ
● ဒိန်ချဉ်၊ ဒိန်ခဲ
>> ဗီတာမင်ဘီစစ် လွန်ကဲနိုင်လား?
တကယ်တော့ နေ့စဉ် ပမာဏအများကြီး မလိုအပ်ပါဘူး။ နေ့စဉ် ပုံမှန်လိုအပ်ချက်က နည်းပါးပါတယ်။ သွေးအားနည်းရင်တော့ ပိုလိုအပ်တတ်တာပေါ့။ လွန်ကဲတယ်ဆိုတာ ရှားပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေ့စဉ် ဗီတာမင်ဘီစစ် လိုအပ်ချက်က နည်းပါးတဲ့အတွက် ပေါင်းစပ် အားဖြည့်ဗီတာမင်ဆေးဝါးတွေ နေ့စဉ်သောက်သုံးရုံနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ အစားအစာနဲ့ ဖြည့်ဆည်းရင်လည်း အဆင်ပြေပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါ အစားအစာတွေကို စားသုံးရင်အဆင်ပြေပါတယ်။
၂၃.၅.၂၀၁၉ | ကျန်းမာရေး ဆိုင်ရာဗဟုသုတများ
လေထလာခဲ့ရင်​ အိမ်​မှာပဲ ဒီနည်းလမ်း​လေး​တွေနဲ့ ကုစားလို့ရတယ်​​နော်​။
ပက်​လက်​လှန်​လိုက်​ပြီး​တော့ ဒူးကိုရင်​ဘတ်​နား ဆွဲကပ်လိုက်​ခွာလိုက်​နဲ့ တစ်​မိနစ်​ကို ၆ကြိမ်​က​နေ၁၀ကြိမ်​​လောက်​ထိ လုပ်​ကြည့်​ပါ။ တစ်​ခါလုပ်​ရင်​ ၅မိနစ်​​လောက်...
မျက်နှာလေး ရဲနေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ
လူတွေ့တာနဲ့ အရင်ဆုံး ကြည့်မိတာက မျက်နှာပါ။ တန်ဖိုးထားရတဲ့ ကိုယ့်မျက်နှာလေး ရဲတွတ်နေတာ ဘာကြောင့်များပါလဲ။
● အဆီပြန်ပြီး အရေပြားတွေ ရောင်လာတဲ့အခါ မျက်နှာလေးပါ ရဲတက်လာပါတယ်။
● အဆီဂလင်းတွေ ပိတ်လို့ဖြစ်တဲ့အခါ အရေပြားတွေ ဖောင်းကြွရဲတွတ်လာတဲ့အတွက် အကွက်ရဲရဲတွေ ဖြစ်လ...